Lahatsoratry ny OJR momba ny bilaogy Bahrainita · Global Voices teny Malagasy
Lahatsoratry ny OJR momba ny bilaogy Bahrainita
Voadika ny 05 Novambra 2018 5:02 GMT
Manampy amin'ny fisarihana ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ao amin'ny fireneny ireo bilaogera ao Barhain. Ny herinandro lasa teo dia nisy lahatsoratra iray tao amin'ny Wall Street Journal. Manana lahatsoratra lavalava momba ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita i Mark Glaser ao amin'ny Online Journalism Review amin'izao fotoana izao:
Lasa fampahalalam-baovao mahomby ao Bahrain ny sehatra fifanakalozan-dresaka an-tserasera, sy ny bilaogera
Nitodika tany amin'ny fanavaozana demaokratika ny firenena kelin'i Helodrano Persiana, saingy niteraka fahatezerana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy vao misandratra ao Bahrain ny hetsika fisoratana anarana ho an'ireo tranonkala sy ny fisamborana tompona forum antserasera malaza.
Nosoratan'i Mark Glaser
Nalefa ny: 17/05/2005
Tsy mila zavatra be vao mahazo ny ranom-boankazon'i Mahmood Al-Yousif, sy hahalalana ny fihetsika farany avy amin'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao (MoI) any Bahrain. Al-Yousif, 43 taona, no bilaogera malaza voalohany ao amin'ny vondronosy bitika ao amin'ny Oala Golfa Persiana ary mitantana orinasan- teknolojia antsoina hoe Computer Point. Taorian'ny nanambaràn'i MoI fa tiany hisoratra anarana amin'ny governemanta ny tranonkala sy bilaogy rehetra, tsy nitazam-potsiny i Al-Yousif.
Tsindrio eto raha hamaky ny ambiny..